Finland oo ku Dhawaaqeysa go'anka ku biirista NATO Maalinta Khamiista ah
HomeWararka CaalamkaFinland oo ku Dhawaaqeysa go’anka ku biirista NATO Maalinta Khamiista ah
Finland oo ku Dhawaaqeysa go’anka ku biirista NATO Maalinta Khamiista ah
May 10, 2022 Wararka Caalamka, Wararka Finland, Wararka Maanta 0
Ra’iisul wasaaraha Finland Sanna Marin ayaa ku dhawaaqi doonta mawqifkeeda ku aaddan ka mid ahaanshiyaha waddankeeda ee ururka gaashaandhigga ee NATO (NATO) Khamiista, May 12-keeda. Sida uu qoray wargeyska Finnishka ah ee Iltalehti.
Marin ayaa horay ugu dhawaaqday in ay soo bandhigi doonto mowqifkeeda 14-ka May, markaasoo hogaanka xisbiga Socialdemokraterna ee Finland uu yeelan doono kulan aan caadi ahayn.
Taariikhda cusub waxay ka dhigan tahay in Marin ay ku dhawaaqi doonto booskeeda isla maalinta uu madaxweynaha Finland Sauli Niinisto ku dhawaaqo booskiisa. Meesha iyo goorta ay tani dhici doonto weli lama go’aamin, laakiin ku dhawaaqida Marin waxay u badan tahay inay iman doonto wax yar ka dib hadalka madaxweynaha. Sida uu sheegay wargaysku.
Wasiirka arrimaha Yurub ee Finland Titi Toborainin ayaa sheegtay in ay aad ugu badan tahay in Finland ay dalbato xubinnimada NATO.
” Ruushka ayaa weeraray Ukraine, taasoo abuurtay xaqiiqo cusub, ” ayuu wasiirku ku daray wareysiga maanta . Waa waqtigii xubinnimada NATO.
Falanqaynta siyaasadda amniga ee guddiga difaaca ee baarlamaanka Finland ayaa lagu soo gabagabeeyay in xubinnimada NATO ay tahay xalka ugu fiican ee difaaca Finland. Sida laga soo xigtay Ecot.